अमेरिकामा कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घण्टामा कतिले ज्यान गुमाए ?
आइतबार, २१ मंसिर, २०७७
एजेन्सी । गत वर्षको डिसेम्बरबाट चीनको हुबेई प्रान्तस्थित वुहान शहरबाट फैलिन सुरु भएको मानिने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वमा लाखौं मानिसले अकालमै ज्यान गुमाएका छन् ।
यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वमा ६ करोड ६८ लाख ३० हजार ९५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । १५ लाख ३३ हजार ७१५ जनाले यस भाइरसको संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । विश्वका ४ करोड ६२ लाख २५ हजार ९१२ संक्रमित निको भएका छन् ।
यसैगरी विश्वमा सबैभन्दा बढी संक्रमण देखिने तथा प्रभावित बनेको राष्ट्र अमेरिका हो । अमेरिकामा पछिल्लो २४ घण्टामा २ लाख ५ हजार २३२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ भने २४ घण्टाकै अवधिमा २ हजार २३४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म १ करोड ४९ लाख ७९ हजार ८२३ जनामा कोरोनाले संक्रमण गराएको छ । २ लाख ८७ हजार ८०७ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
यस्तै ८७ लाख ८५ हजार ७७९ संक्रमित निको भएका छन् । अन्य केही प्रभावित राष्ट्रहरुको अवस्था तल तालिकामा हेर्न सकिन्छ ।
सिटिजन्स बैंकका डेपुटी सीइओ देवकोटाले राजीनामा दिए
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंकका डेपुटी सीइओ बोधराज देवकोटाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । देवकोटाले आगामी चैत १ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएका हुन् । देवकोटा २०७६ साल बैशाख १ गतेदेखि डेपुटी सीइओ
बढेपछि कति पुग्यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ?
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले सोमबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको हो । निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार प
पक्राउ परेकालाई भेट्न जाँदा पत्रकार श्रेष्ठ पनि पक्राउ
काठमाडौँ । पत्रकार विकास श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सडक विस्तारको विरोध गर्दा पक्राउ परेका नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुलाई भेट्न गएका पत्रकार श्रेष्ठलाई प्रहरीले आज बिहान पक्राउ गरेको हो ।